सुनको मूल्य पाँच सय रुपैयाँले ओरालो, चाँदीको भाउ कति ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७८, बिहीबार ११:४१
७ असोज, काठमाडौं । साताको पाचौँ दिन बिहीबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ९० हजार एक सय रुपैयाँ कायम भएकोमा बिहीबार पाँच सय रुपैयाँले घटेर ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको हो ।
बिहीबार छापावाल सुन प्रति १० ग्राम ७६ हजार आठ सय २० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला ८९ हजार एक सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुन प्रति १० ग्राम ७६ हजार चार सय ३५ रुपैयाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ ।
बुधबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । महासंघले चाँदी प्रतितोला एक हजार १५५ रुपैयाँ कायम गरेको छ । मंगलबार एक हजार एक सय ६५ कायम भएको थियो । त्यस्तै, चाँदी प्रति १० ग्रामको मूल्य नौ सय ९० रुपैयाँ कायम भएको महसंघले जनाएको छ ।
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति ?
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा ६ सयले घट्यो
चाडपर्व नजिकिएसँगै सुनको मूल्य निरन्तर उकालो
साताको दोस्रो दिन सुनको मूल्य तीन सयले बढ्यो